Mitatitra ny halatra atiny amin'ny Adsense ho fanitsakitsahana ny DMCA | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 21, 2008 Asabotsy, Jona 25, 2016 Douglas Karr
Nanapa-kevitra ny handeha hiady amin'ny mpanonta iray aho izay nandroba ny sakafoko ary namoaka ny atiny tamin'ny anarany sy ny tranokalany. Mihazakazaka manao doka izy ary mahazo vola amin'ny atin'ny tranokalako ary leo an'izany aho. Ireo mpanonta, anisan'izany ireo bilaogera, dia manan-jo ao anatin'ny Daty Laharam-pahamehan'ny Digital Millennium.
Inona ny DMCA?
Ny Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dia lalàna amerikanina (napetraka tamin'ny lalàna tamin'ny volana oktobra 1998) izay nanamafy ny fiarovana ara-dalàna ny zon'ny fananana ara-tsaina izay tsy voarakitra ao amin'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona amerikana tany am-boalohany. Ilaina ireo fanavaozana ireo mba handraisana ireo teknolojia fifandraisana amin'ny haino aman-jery vaovao, indrindra ny amin'ny internet. Ny fanovana mader dia ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona amerikana mifanaraka amin'ny World Intellectual Properties Organization (WIPO) Fifanarahana momba ny zon'ny mpamorona sy ny fifanarahana WIPO Performances Phonograms.
Rehefa nandinika ny tranokalan'ny mpanonta aho dia nahatsikaritra fa nahazo ny fahana tamin'ny alàlan'ny fahana RSS-ko izy ireo. Fanitsakitsahana ny Fepetran'ny serivisy feedBurner.
Ny tena zava-dehibe dia ny manao doka Adsense ity mpanonta ity. Mangalatra atiny sy mandeha ny doka Adsense dia a fanitsakitsahana mivantana ny Fepetran'ny serivisy Google.
Nifandray tamin'i Adsense aho ary nitatitra ny olana, ary nihaona tamin'ny takiana fanampiny hamitako azy. Manazava ny tranokala Adsense:
Mba hanafainganana ny fahafahanay manodina ny fangatahanao, azafady mba ampiasao ity endrika manaraka ity (ao anatin'izany ny isa fizarana):
Fantaro amin'ny antsipiriany feno ny sanganasa manana zon'ny mpamorona izay inoanao fa voahitsakitsaka. Ohatra, "Ny sanganasa misy zon'ny mpamorona dia ny lahatsoratra miseho amin'ny http://www.legal.com/legal_page.html."
Fantaro ny fitaovana izay lazainao fa manimba ny sanganasa misy zon'ny mpamorona voatanisa ao amin'ny laharana # 1 etsy ambony. Tsy maintsy fantarinao ny pejy tsirairay izay voalaza fa misy fitaovana manimba amin'ny fanomezana ny URL-ny.
Omeo fampahalalana ampy tsara hahafahanao hifandray amin'i Google (aleonao ny adiresy mailaka).
Ampidiro ity fehezan-teny manaraka ity: "Mino aho fa ny fampiasana ireo fitaovana manana zon'ny mpamorona voalaza etsy ambony ao amin'ireo pejin-tranonkala voalaza fa manitsakitsaka dia tsy nomen'ny tompon'ny zon'ny mpamorona na ny maso ivoho na ny lalàna."
Ampidiro ity fanambarana manaraka ity: "Mianiana aho, amin'ny sazin'ny fianianana, fa marina ny fampahalalana ao amin'ilay fampandrenesana ary izaho dia tompon'ny zon'ny mpamorona na mahazo alalana hiasa amin'ny anaran'ny
tompon'ny zony manokana voalaza fa voahitsakitsaka. ”
Manaova sonia ny taratasy.
Alefaso amin'ity adiresy manaraka ity ny fifandraisana an-tsoratra:
Attn: Fanohanana AdSense, Fitarainana DMCA
NA Fax ho:
(650) 618-8507, Attn: Fanohanana AdSense, fitarainana DMCA
Handefa mailaka anio ity taratasy ity!
Tags: AdSenseCopyrightDMCAfitarainana dmcafitarainana dmcagoogle adsense
Fa maninona no tsy ny Networking amin'ny fandaharam-pianarana rehetra?
21 Jul 2008 amin'ny 12:57 PM
Hevitra tsara izany. Nanana splogger aho nanangana ny atiny nandritra ny fotoana kelikely ary ny hafatrao dia nanosika ahy handray andraikitra ihany koa. Toa tsy hoe nampiasain'izy ireo hanampiana fidiram-bola izy ireo fa kosa ampiasaina hivezivezena indray ny fifamoivoizana mankamin'ny tranokalan'izy ireo hafa. Gah.
21 Jul 2008 amin'ny 4:33 PM
Miala tsiny fa mandre momba an'i Doug ity, manantena aho fa milamina io.
21 Jul 2008 amin'ny 5:07 PM
Fahaizana tsara indrindra amin'ny fandaminana an'io !! Misaotra anao noho ny mavitrika.
Mirary soa indrindra, Barbara
Jul 12, 2010 amin'ny 11: 27 AM
Mety hametraka fitoriana amin'ny orinasa mpampiantrano ihany koa.
Manana olona mangalatra ny atiny ary koa mpifaninana sy bilaogy tsy ara-barotra marobe ao amin'ny orinasako.
Manana tambajotran-tranonkala am-polony maro hafa ity lehilahy ity.
Satria manana ny atiny rehetra momba ny sohika sy ny allergy ary koa ny atiny rehetra avy amin'ny bilaogy hafa izy, dia matetika izy no tsy mahomby amin'ny famoahana azy manokana.
Niteraka fisafotofotoan'ny olona manandrana miverina amin'ny toerany izany.
Mametraka ny fitoriana amin'i Google aho izao.